पूर्व-पश्चिम यात्राबाट कच्चा पदार्थ बटुलेँ, अब विकासको मार्गचित्र– बाबुराम [विशेष कुराकानी]
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै पूर्व–पश्चिम यात्रा सम्पन्न गरेका छन् । एकमहिने यात्राको अनुभव कस्तो रह्यो ? लोकान्तर डटकमका लागि सुशील पन्तले डा. भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सार :
मध्यपहाडी लोकमार्ग नै किन ?
हामीले जनसंवाद यात्राका लागि मध्यपहाडी लोकमार्ग किन रोजेको भने भौगोलिक एकीकरणपछि मध्यपहाड नेपालको मेरुदण्ड नै हो । लामो समयसम्म नेपालका बहुसंख्यक नागरिक मध्यपहाडमै बस्थे । पछिल्लो चरणमा ग्रामीण अर्थतन्त्र, पहाडी अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएपछि जनसंख्या पलायन हुन थाल्यो । धेरैजसो तराई झर्न थाले, केही विदेश पलायन भए । त्यसले गर्दा ८० प्रतिशत ओगट्ने पहाडी भेग र मध्यपहाडले ५० प्रतिशत भू–भाग ओगट्छ, त्यसको विकास र समृद्धि विना नेपाल विकसित र समृद्ध बन्न सक्दैन, पहिलो कारण यो हो ।
दोस्रो, एक प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने ९ वटा भाषा बोल्ने नागरिक यही क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । लिम्बू, खम्बू, तामाङ, नेवार, मगर, गुरुङ र खसआर्य मध्यपहाडमा बस्छन् । यी जातिको बीचमा सही अर्थमा भावनात्मक एकीकरण नभई पनि देशको एकीकरण र विकास हुन सक्दैन । मध्यपहाडी लोकमार्गको परिकल्पना मैले नै मूल रूपमा गरेको थिएँ र त्यसैको यात्रा गरेर यो क्षेत्रको विकासमा के योगदान गर्न सकिन्छ, त्यही उद्देश्यसहित यो यात्रा गरेको हुँ ।
सजिलो बाटोबाट त इतिहास निर्माण हुँदैन । सबैले हिँड्ने बाटो त जो पनि हिँड्छ । मेरो जीवनको लक्ष्य नै सत्य र न्यायको खोजी स्थापना गर्नु भएको हुनाले अग्रगामी रूपान्तरण गर्ने मेरो उद्देश्य रहँदै आएको छ । नेपाललाई कार्यक्षेत्र बनाउने संकल्प सहित नेपाललाई बुझ्ने र बदल्ने मेरो संकल्प छ । बदल्न जहिलेसुकै पनि अरूले गर्न नसकेका काम गर्नुपर्छ, त्यसकारण मैले जहिले पनि नयाँ, अफ्ठ्यारा र दीर्घकालीन महत्त्वका काम रोज्छु, यस अर्थमा यस मार्गको छनोट गरिएको हो ।
रूपान्तरित भएछ त समाज ?
मध्यपहाडी यात्रामा निस्कँदा बाटोले जोडिएसँगै मानिसहरूमा नयाँ विचारको प्रवेश भएको देखियो । जनता अलि सचेत बनेका भेटिए । राजनीतिक कुराकानी गर्ने, आवजजावत र शहरसँग जोडिँदा चेतनाको विस्तार भएको पाएँ ।
आर्थिक रूपमा पनि थोरै परिवर्तन भएका छन् । बाटोवरिपरि बजारहरू बन्ने, किसानले पनि व्यवसायमूलक खेती गर्ने, फलफूल खेती र पशुपालनमार्फत् आयआर्जन गर्ने क्रम पनि क्रमशः हुन थालेको देखियो, यो सकारात्मक परिवर्तन हो । तर जुन गतिको आवश्यकता छ नि, त्यो गतिको विकास भएको देखिएन । विकासका हिसाबले पूर्वमा ठीकठीकै, मध्यमा मध्यमस्तरको र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम निकै पछाडि देखियो । राजनीतिक चेतनामा जुन ढंगको परिवर्तन भएको छ, त्यही अनुसारको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन पछाडि परेको अनुभूति भयो ।
पुरानो पूँजीवादी विचार र सामन्तवादी संस्कृति भत्किएको र नयाँले आकार नलिएको अवस्थामा जनतामा अलिकति निराशा त देखिन्छ । सामन्ति जडता, रुढीवाद नभत्काएसम्म विकास हुँदैन, अहिले भत्किन थालेको देखिएको छ । वैज्ञानिक प्रगतिशीश विकासले स्थान लिइसकेको छैन । सकारात्मक विकल्प नभएमा न पुरानो, न नयाँ, खिचडी खालको संरचना बन्ने खतरा रहन्छ । अत्यन्त फोहोरमैलामा बसिरहेका मानिस पनि आधुनिक खालका सिनेमा, गीतसंगीतमा रमाइरहेको अवस्था पनि छ ।
रमाइलो पाटो के देखियो भने, हिसिलाजीले पनि नोट गर्नुभयो, उहाँ त शहरी क्षेत्रमा हुर्केको मानिस, गाउँमा महिलाहरूले ‘स्मार्ट फोन’ चलाइराखेका छन् । दाउरा र स्याउला बोकिराखेका छन् । गाईबाख्रा पनि धपाइराखेका छन् । त्यस्तो सीन पनि देखियो, त्यो निकै रोचक लाग्यो ।
'अर्थमन्त्री हुँदा फालेको बिउ फल लागेछ'
कच्ची बाटो मात्र बनेकाले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्दैछ । बजार थोरै विस्तार हुँदैछ । मानिसहरूले बजारलाई केन्द्रित गरेर वस्तु उत्पादन गर्दैछन् । तर आयातित वस्तुहरूको उपभोग बढी देखिन्छ । आयातित वस्तुले पिछडिएको अर्थतन्त्रमा जसरी प्रवेश गरेका छन्, त्यही मात्राका किसानहरूले उत्पादन गरेर निर्यात् गर्न नसकेको र आय आर्जन गर्न नसकेको स्थिति सोचनीय छ ।
मैले बजेटमा पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्ग तथा केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा ल्याएको थिएँ । त्यो काम अगाडि बढेको त देखियो, तर जुन गतिमा जानुपर्ने, त्यो चाहिँ देखिएन । गाउ–गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी भनेर प्रत्येक गासिवलाई एक–एक लाख दिएको थिएँ । यस्ता सहकारी धेरै ठाउँमा त चल्न सकेनन्, केही ठाउँमा राम्रो काम गरेको पनि देखियो ।
अर्को उल्लेख्य काम के गरेको थिएँ भने, प्रायः अन्तिम चौमासिकमा खर्च नभएको बजेट अर्थमन्त्रीले रकमान्तर गर्ने चलन हुन्छ, त्यस क्रममा मैले ७५ वटै जिल्लामा गरेको थिएँ । मैले बिर्सिसकेको थिएँ, त्यो बजेटमार्फत् कुनै ठाउँमा स्कूल र कुनै ठाउँमा बाटो बनाएको कुरा जनताले सम्झाउँदा मलाई खुशी लाग्यो ।
डोजर संस्कृति र सडक
नेपालजस्तो पहाडी अर्थतन्त्र र कृषिप्रधान देशमा विकास भनेको बाटो नै हो । बाटो आएपछि चेतना ल्याउँछ र भोक जगाउँछ । त्यसपछि सीपका लागि शिक्षा जरुरी हुन्छ र कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । बाटो, शिक्षा र कृषिमा जोड गरौं भनेर भन्दै आएको छु । बाटो निर्माणका क्रममा भइरहेको डोजर प्रयोगप्रति चिन्ता लाग्यो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा त आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ, सहायक मार्गलाई हरित मार्गको रूपका स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएँ । स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्दा मैले भनेँ, आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने बाटोलाई १२ महिनै चल्ने खालको बनाउनुस् । अन्य सहायक मार्गलाई हरित मार्ग बनाउँदा वातावरण संरक्षण पनि हुन्छ र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको धारणा
अपेक्षा धेरै हुनु स्वभाविक हो । संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट नेकपाको दुईतिहाइको सरकार बन्यो, यसबाट स्वतः नै मान्छेले बढी अपेक्षा गरे । विकास र समृद्धि नै मुख्य एजेण्डा बनेको पनि छ । एक वर्षमा जति हुनुपर्ने हो भएन भनेर आम जनतामा निराशा देखियो, खासगरी दुईवटा क्षेत्रमा ।
एउटा त सुशासन । विधिको शासन पालन गर्ने र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्षेत्रमा जति हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन भन्ने आम गुनासो देखियो । सत्ताधारी दलका स्थानीय प्रतिनिधिले पनि त्यो भन्नुभयो ।
दोस्रो, विकास र समृद्धिका लागि पनि फाट्टफुट्ट निरन्तरताका काम भा’छन् । तर तीव्र छलाङ मार्ने गतिले नयाँ परियोजना शुरु हुनुपर्ने हो, त्यसो भएको छैन । सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य र सिँचाइका आयोजना शुरू भएका छैनन् । जनताहरू यस विषयमा असन्तुष्ट छन् ।
सचेतना के देखियो भने, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले ऐन, नियम र कर्मचारी नहुँदा काम गर्न नपाएको गुनासो गरे । निर्वाचित नयाँ युवाले योजना बनाएर केही काम गर्न खोजे जस्तो देखियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि समयमा कानून र वित्तीय आयोग बनाएर बजेट दिनुपर्नेमा, त्यसो नभएको गुनासो सुनियो ।
गतिविधि भएको छ । अपेक्षाको तुलनामा सन्तुष्टि नभएपनि जनप्रतिनिधिको गतिविधि चाहिँ सापेक्ष ढंगले भएको जस्तो देखियो । निरन्तरताको हिसाबले मानिसमा जागरण आएको छ ।
जनसंवाद यात्राको उपलब्धि के ?
असल राजनीति र समावेशी विकासका लागि जनसंवाद यात्रा भन्ने हाम्रो ‘थिम’ थियो, त्यसका लागि जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, शिक्षक, बुद्धिजीवी र किसानहरूसँग संवाद गर्ने र यथार्थ बुझ्ने मुख्य लक्ष्य थियो । पार्टीको प्रचार भन्दापनि देशको राष्ट्रिय एजेण्डा निर्माण गर्न कसरी सकिन्छ, यो देशलाई हाम्रैकालमा कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ, भन्ने उद्देश्य थियो ।
दोस्रो, राजनीति असल, सफा र भ्रष्टाचारमुक्त भएन भने विकास र समृद्धि हुँदैन । भ्रष्टाचारको बिगबिगी जुनरूपमा माथिबाट तल जाँदैछ, त्यसलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छलफल गर्‍यौं । सुशासनमा जोड दियौं, यसमा जनताको चासो पनि देखियो । केन्द्रमा ठूला काण्ड भए, तल पनि तीनै दलका कार्यकर्ता हुन्, ठूला नेताको सिको गर्ने । तल पनि भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको जनगुनासो सुनियो ।
यात्रामा संगठन विस्तारको कुरै गरेनौं । कयौं मानिस सदस्यताका लागि इच्छुक थिए, तर पार्टी सदस्याता बाँढ्ने र पार्टी प्रवेश गराउने हाम्रो मिसन थिएन । यो देशमा लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियापछि समृद्धिको युग शुरू भएपनि आर्थिक विकासको राष्ट्रिय रणनीति बनेको छैन ।
हामीबाट जनताले राष्ट्रिय विकासको मार्गचित्र खोजेकाले मार्गचित्र बनाउन लागेका हौं । यसले ठूलो फिडब्याक दियो । कच्चा पदार्थ दियो । अब तराईको हुलाकी लोकमार्गमा पनि यात्रा गरेर राष्ट्रिय विकासको मार्गचित्र बनाउने सोचाइ बनाएका छौं । निजी क्षेत्रसँग पनि संवाद गरेर योजनालाई पूर्णता दिनेछौं । संसद्को अर्थसमितिमा पनि यो बहस चलाउने योजना बनाएको छु ।
दौरासुरुवाल प्रेम कि छेपाराको रंग ?
म सबै संस्कृतिको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ । भाषा, भेषभुषा र गीतसंगीत भनेका भैतिक र अभौतिक संस्कृति हुन्, सम्पदा हुन् । नेपालभित्र प्रयोग हुने सबै भेषभुषा राष्ट्रिय भेषभुषा हुन् । नेपालभित्र बोलिने सबै भाषा राष्ट्रिय हुन् । सबै कला संस्कृति राष्ट्रिय संस्कृति हुन् । सबैको सम्मान गर्छु ।
मैले व्यावहारिक रूपमा दौरासुरुवाल लगाएको थिइनँ । सानैदेखि कमिज पाइन्ट लाउने बानी बस्यो । अहिले मध्यपहाडी लोकमार्गमा जाँदा सुविचारित ढंगले नै लगाएँ । सातवटै भाषा क्षेत्रमा जाँदा उनीहरूले नै लगाउने भेषभुषा लगाएँ । तामाङको पनि लगाएँ, गुरुङको पनि लगाएँ ।
दौरा सुरुवाल यहीँबाट लगेको थिएँ, हिसिलाजीले बजारबाट किन्नु भएको थियो । भेरी नदी क्रस गरेर चौरजहारी कटेपछि दौरा सुरुवाल लगाएँ । महेन्द्रकालीन पोशाक कसैले भनेपनि मैले भनिनँ, यो कुनै कालीन होइन । यो सुदूरपश्चिममा छलिया कि के नाँच हुन्छ, त्यसमा पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो पोशाक लगाएर नाचेको देखिन्छ । यो खसहरूको पोशाक हो ।
खस नेपालका आदिवासी जाति हुन् । पछि पूर्वतिर आउँदा ब्राह्मण भन्न लागे । मलाई लाग्यो, प्रदेशको नाम नै खसान प्रदेश राख्दा हुन्छ । आवश्यकता अनुसार सबै पोशाक लगाउँछु । संसद्‍मा जाँदा लगाउनैपर्छ भन्ने रहेन, आवश्यकता अनुसार लगाउँछु । मलाई सझिलो लाग्यो । सुरुवाल तल टाइट हुँदो रहेछ, जाडो ठाउँमा जाँदा गजब हुने ।